Chamomile (ချန်မိုမိုင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Chamomile (ချန်မိုမိုင်း)
Chamomile (ချန်မိုမိုင်း) ကဘာလဲ။
ချန်မိုမိုင်း ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Chamomile ကို စိတ်ချရတဲ့ အပင်တစ်ခုအဖြစ် ယူဆကြပြီး ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းများစွာမှာ အစာအိမ်နာခြင်းနဲ့ စိတ်ငြိမ်ဆေး အပျော့တစ်မျိုး အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုတွေမှာ Chamomile ကို အခြားအပင်တွေနဲ့ ပေါင်းသုံးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး အများကြီး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပေါင်းသုံးမှုကြောင့် အကျိုးကျေးဇူး ရှိလာခြင်းဟာ တစ်မျိုးတည်းကြောင့်လို့ ပြောဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
Chamomile နဲ့ အခြားအပင်တွေ ပေါင်းသုံးခြင်းဟာ အစာအိမ် နာခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ Chamomile ပေါင်းစပ်ရည်နောက်တစ်မျိုးဟာ ကလေးတွေမှာ ဗိုက်နာခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
Chamomile နဲ့ အာလုပ်ကျင်းခြင်းဟာ ကင်ဆာကုသမှုတွေ ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ပါးစပ်တွင်း အနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ သုတေသနတွေက Chamomile ဟာ အခြားအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေမှာ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ လိပ်ခေါင်း၊ စိတ်ပူခြင်းနဲ့ အိပ်မပျော်ခြင်းတွေအတွက် အကျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရေပြားပေါ်မှာ အသုံးပြုရင် Chamomile ဟာ အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေပြီးတော့အနာကျက်မှု ကို အားပေးပါတယ်။ လေ့လာမှု အချို့က သူဟာ နှင်းခူနာကိုက ကုသရာမှာ hydrocortisone လိုမျိုး အကျိုးရှိတယ်လို့ ဖေါ်ပြပါတယ်။
Chamomile ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Chamomile ရဲ့ flavonoid အပိုင်းဟာ စိတ်ငြိမ်စေတဲ့ အစွမ်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Chamomile, glucoside နဲ့ chamaemeloside တွေမှာပါတဲ့ flavonoids နှစ်ခုဟာ သွေးအတွင်းသကြားဓါတ်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
ချန်မိုမိုင်း အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Chamomile ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
Chamomile မျာ courmarin အနည်းငယ်ပါဝင်ပြီး သွေးကြဲစေတဲ့ အာနိသင် အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အချိန်အကြာကြီး ပမာဏ အများကြီးသုံးမှ ဖြစ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Chamomile ကို ခွဲစိတ်မှု မပြုခင် နှစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီး အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်သင့်ပါတယ်။ ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှာ စိုးရိမ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချန်မိုမိုင်း က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ဒီဆေးကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အချို့လေ့လာမှုတွေက Chamomile ဟာ မမွေးသေးတဲ့ကလေးတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး ကလေးပျက်ကျနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဆက်စပ်မှုကို အတည်ပြုဖို့ လေ့လာမှုတွေ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
Chamomile ကို အခြားစိတ်ငြိမ်ဆေးတွေ၊ အရက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး သောက်ရင် သူတို့ရဲ့ အာနိသင်ကို ပိုများစေတာမို့ ပေါင်းသောက်ခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။
ချန်မိုမိုင်း ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Chamomile ဟာ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။
• မျက်နှာ၊ မျက်လုံး ပူလောင်ခြင်း။
• အိပ်ချင်ခြင်း (ပမာဏ အများကြီး သောက်ရင်)၊ အန်ခြင်း
ချန်မိုမိုင်း ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Chamomile ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
German Chamomile ကို ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းသောက်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ estrogen pills တွေနဲ့ ပေါင်းသောက်ခြင်းဟာလည်း estrogen pills တွေရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Chamomile ဟာ အသည်းကနေ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေနဲ့ အစွမ်းထက်မှုကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။
သူ့ကို သွေးကြဲဆေးနဲ့ ပေါင်းသောက်ခြင်းဟာ သွေးခဲခြင်းကို အလွန်အမင်း နှေးစေတာကြောင့် အညိုအမဲစွဲခြင်းတွေ၊ သွေးထွက်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Chamomile ဟာ အရက်ရဲ့ အာနိသင်ကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ချန်မိုမိုင်း အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Chamomile အသုံးပြုတဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးအချိုးအစားဟာ ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ Chamomile ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ချန်မိုမိုင်း က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Chamomile ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဆံပင်ပျော့ဆေး
• ဒီအပင်ကို အလှပြင်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
version. Page 158.
Vitamins and Supplements Lifestyle Guide. http://www.webmd.com/vitamins-and- supplements/lifestyle-guide-11/supplement-guide- chamomile. Assessed August 6, 2016.
Chamomile. http://www.drugs.com/cdi/chamomile.html. Assessed August 6, 2016.
German chamomile. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 951-german%20chamomile.aspx?activeingredientid=951&activeingredientname=german%20chamomile. Assessed August 6, 2016.Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print
German chamomile. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 951-german%20chamomile.aspx?activeingredientid=951&activeingredientname=german%20chamomile. Assessed August 6, 2016.